BAROOR-DIIQ (MA BAXAY HALYEYGIYO HALGAMAAGII GAARIYE!)
You are here: Home Home BAROOR-DIIQ (MA BAXAY HALYEYGIYO HALGAMAAGII GAARIYE!)
Ilaahay geerida iyo masiibooyinka kaleba haynaga furdaamiyee, sanadkan 2012-ku waa sanadkii murugada xagayga, waayo waxa iga baxay dad badan oo noloshayda qiima weyn ku lahaa. Isniintii oo ay taariikhdu tahay 1/10/2012 ayaa iyana noqonaysa maalin mugdi iyo madaw badan oo lasoo deristay dhamaan ummada afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan reer Somaliland oo uu ka baxay udub-dhexaadkii suugaanta Abwaan iyo Mujaahid Maxamed
Xaashi Dhamac Wacays (Gaariye). Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu janadii fardowsa inoo geeyo; aduunyo qiima malahee, inagana inaga yeelo kuwii ku cibra qaata aamiin.
Habeen looma hoydaay
Habaas iyo mur dacareey
Habaw iyo jid dheereey
Dadka kii haybadliyo
Dadka kii hilmaamaba
Hore uma hujuumtide
Ma baxay halyeygiyo
Halgan iyo dagaaliyo
Imisuu hayaan dheer
Usoo huray dadkiisoo
Iyo hadalkiisa toolmoon
Ugu hidiyay dumarkiyo
Habaqlaha la duudsiyay!
Hareef iyo dhibaatiyo
Hanjabaad usoo maray
Dulmi ruux hadhsanayoo
Ku halaanhalay xaqiisii!
Dulmanaha u hiishoo
Heeggan ugu jiray!
Ku habay jidkoodii!
Hami ugu dabooloo
Imisuu halyey iyo
Soo saaray hanadoo
Afka hooyaba baray!
Geeridu haq weeyee
Hayin lagu badhaadhiyo
Dadka kii hadheeyiyo
Kol hadii abwaankiyo
Naga baxay halyeygii
Higaadiyo afkuu qoray
Da' yartii ku heesaan
Gaariye wuu hoydee
Magaciisii muu hadhin!
Dumarkuna hengel iyo
Hagoog wada xidhaan
Waxba maan hagaajine
Ducaan ku huwinayaa
Allow su'aalaha hadhee
Ku haddee jawaabtoo
Hore hore u garansii
Allow hoy wacaniyo
Ku casuum halkii roon
Allow durdurkiyo haraha
Ku hagaaji meel wacan
Hal-abuurre: Khaalid Kileesh